यीनले किन कुकुरसँग विवाह गरिन् ? - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ रोचक ∕ यीनले किन कुकुरसँग विवाह गरिन् ?
यीनले किन कुकुरसँग विवाह गरिन् ?
झिल्को डटकम २०७७, कात्तिक २ गते ७:२४ मा प्रकाशित
एजेन्सी । भारको छत्तीसगढको कोरबा जिल्लामा आदिवासी मुन्डा समाजमा एउटा परम्परा पनि हाल सम्म चलिआएको छ । मानिसहरु ग्रह दोष मेटाउनको लागि बच्चाको विवाह कुकुरको बच्चासँग गरिन्छ । मकर संक्रान्तिको अर्को दिन पारम्परिक गीताकोबीचमा दुध खादै गरेको बच्चासहित पाँच वर्षका ८ बच्चाको विवाह धुमधामसँग गर्ने गर्छन् ।
बच्चाको साथमा दुलही र दुलाहाको रुपमा कुुकुरको बच्चा राख्छन् । रमाइलो माहौलमा समाजका मानिसहरु गीतामा पनि पढ्छन् ।
उनीहरुको पुर्वजबाट चल्दै आएको परम्परा अहिलेपनि त्यहाँका मानिसहरुले गर्दै आएका छन् । यो परम्परामा कुकुरलाई दुलाहा बनाएर आफ्नो सानो छोरीको सिउँदोमा आमाले सिन्दुर हाल्ने गर्छिन् ।
पत्नीको यादमा उफ्री उफ्री रोएपछि अचानक प्लेन ल्यान्डिङ !
अरेबियन सागर भित्र पसेर विवाह !
धुमधामसँग भयो कुकुरको विवाह !